Mbadamba ụrọ: Nchịkọta Ejiji na Atụmanya | Martech Zone
Mbadamba ụrọ: Nkọwa Ọnọdụ na Atụmanya
Sunday, June 29, 2014 Douglas Karr
Enwere m onye ọrụ mbadamba ụrọ… Enwere m iPad na iPad Obere ma e wezụga MacBook Pro na iPhone m. N'ụzọ na-akpali mmasị, ana m eji ngwaọrụ ọ bụla akọwapụtara nke ọma. My iPad Obere, dịka ọmụmaatụ, bụ mbadamba zuru oke maka iweta nzukọ na njem azụmahịa ebe enwere ọtụtụ ịgagharị na achọghị m ịdọrọ na laptọọpụ m na eriri niile dị mkpa, chaja na ngwa. My iPad na-anọkarị n'akụkụ akwa m nke telivishọn maka ịzụ na ịgụ ihe. O buru oke ibu maka azụmaahịa mana ọ karịrị akarị n'ụlọ.
Mbadamba na laptọọpụ emebiwo ahịa desktọọpụ. Na 2013, ahịa desktọọpụ PC kwụsịrị 98%! Emechara m ngwa-ụlọ m ọrụ ụlọ ọrụ na desktọọpụ lara ezumike nká n'ọnọdụ nke a laptọọpụ guzoro na a Ihe ngosi Thunderbolt. Na arụpụtaghị m n'ụlọ abawanyela kemgbe m na-ebu laptọọpụ m n'etiti ọfịs na achọghị m ichegbu onwe m maka ịtinye na chaja, ịnyefe faịlụ, wdg.
Na 2013 mbadamba nkume gbawara, na-abawanye nnukwu 68% iji ruo 195.4 nde nkeji n'ụwa nile. Site na ire ahịa zuru ụwa ọnụ ka ọ ga-eru 1 ijeri nkeji site na 2017, ọ dịla mkpa maka ndị isi na ọkwa ọ bụla ịghọta mkpa mbadamba nkume na otu ha si emetụta usoro ịzụta na njikọta ndị ahịa niile.
Ijide n'aka na saịtị gị na-anabata iji mbadamba - yana iji ohere nke nchọgharị ma ọ bụ mmepe ngwa - nwere ike ịnye ọganihu dị ukwuu na onye ahịa gị na njikọ ndị ọbịa yana ntụgharị. Nke bụ eziokwu bụ na ndị na-arụ ọrụ mbadamba nwere ihe omume a kapịrị ọnụ, dị ka ịgụ na ịzụ ahịa, na ha hụrụ n'anya nke ukwuu iji mbadamba nkume ha maka ihe ngosi mkpanaka ha, laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ. Kedụ ahụmịhe dịịrị ndị na - agụ akwụkwọ gị?
Tags: 2014ole mbadamba nkume rereweebụsaịtị zara ajụjụmbadamba mbadambambadamba alaọnụ ọgụgụ mbadambaọnụ ọgụgụ ojiji mbadambambadamba ihe eji eme ihenjem na mbadambausablenet
Okwu Mmepe Okwu ndi mmadu na WordPress
Jun 30, 2014 na 1: 50 PM
Ọ dị onye na-elele mbadamba Microsoft ọhụrụ / pc. Aga m enweta otu taa ma gbalịa ịpụ ngwaahịa Apple niile. G'bye Apple! Anọ m na Macbook pro, iMac, mbadamba nkume na iPhone. F-nke ahụ! Kwuo maka imeghe teknụzụ!
Jun 30, 2014 na 2: 00 PM
Abụ m onye ofufe nke Apple ma ahụbeghị m ihe kpatara m ga-eji pụọ na ha Nancy.